यी युवतीको बिहे कुकुरसँग गरेपछि, कारण सुनेपछि प्रहरी नै चकित! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > यी युवतीको बिहे कुकुरसँग गरेपछि, कारण सुनेपछि प्रहरी नै चकित!
admin September 15, 2020 जीवनशैली, बिचित्र, रोचक, समाज	0
एजेन्सी- मानिसहरुले विभिन्न प्रथा तथा प्रचलन चलाएको पाइन्छ । कुनै पनि बालबालिकाको विवाह कुकुरसँग गराइन्छ भन्ने सुन्दा तपाइँलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । तर अझै यस्तो प्रचलन रहेको पाइएको छ । भारतको जमशेदपुरस्थित आदिवासीहरुको बाहुल्य रहेको आदित्यपूर गाउँमा एउटा अन्धविश्वासको परम्परा अझैसम्म पनि कायम छ ।
गाउँमा यदि कुनै पनि बच्चाको पहिले माथिको दाँत झर्‍यो भने त्यसलाई ठूलो अलक्षिन मान्ने गरिन्छ । यसको दोष निवारणका लागि बाल्यकालमै कुकुरसँग विवाह गराइदिने प्रचलन रहेको छ । बालकहरुलाई कुकुर्नीसँग र बालिकाहरुलाई कुकुरसँग जोडी बाधिदिने यो अन्धविश्वास आजसम्म पनि त्यहाँका मानिसहरुले पालना गर्दै आएका छन् ।
आफ्ना छोराछोरीलाई कुकुरसँग विवाह गराउने बाबुआमाले खराब ग्रहलाई काट्नका लागि यस्तो गर्नुपरेको बताउँने गरेका छन्। सानैमा कुकुरसँग विवाह गराइदिएपछि ठूलो हुँदा उनीहरुलाई ग्रहदशाले पछ्याउन नसक्ने त्यहाँका मानिसहरुको विश्वास छ ।
उक्त आदिवासी समाजमा अलक्षिन हटाउने नाममा यो कुप्रथा चलेको हजारौँ वर्ष भइसकेको छ । अहिले पनि ति आदिवासीहरु यसलाई आफ्नो संस्कृतिकै अंगका रुपमा मान्छन् । -एजेन्सीको सहयोगमा – समाचारको अन्य भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस् ***